Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu na-enweghị mgbochi iche na Singapore ugbu a na Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Lufthansa na ụgbọ elu ụgbọ elu Singapore ga -enye otu n'ime ụgbọ elu ndị a nke Vaccinated Travel Lane kwa ụbọchị, site na Frankfurt ma ọ bụ Munich, malite na Septemba 16.
Flightgbọ elu kwa ụbọchị dị ka nke Septemba 16 na nkwado nke ụgbọ elu Singapore.
Nbanye na-enweghị mgbochi na Singapore naanị ma ọ bụrụ na njem amalite na Germany.
Mwepụ iche iche na -emetụta ụgbọ elu akọwapụtara, nke a maara dị ka ụgbọ elu Vaccinated Travel Lane (VTL).
Ịbanye na Singapore site na Germany maka ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga -ekwe omume ọzọ na 8 Septemba. Mwepụ iche nke amachibidoro mgbe ị rutere Singapore agaghịzi achọ site ugbu a gaa n'ihu. Germany bụ obodo izizi nke nnukwu obodo dị na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia ji banye nkwekọrịta maka nke a.
Mwepụ iche iche na -emetụta ụgbọ elu akọwapụtara, nke a maara dị ka ụgbọ elu Vaccinated Travel Lane (VTL). Lufthansa na Singapore Airlines ga -ejikọ aka na -enye otu n'ime ụgbọ elu VTL ndị a kwa ụbọchị, ma ọ bụ site na Frankfurt ma ọ bụ Munich, malite na 16 Septemba. Ịdebanye akwụkwọ ga -ekwe omume. Ndị ahịa ga -enwe ike ịdebanye aha maka ụgbọ elu VTL na webụsaịtị gọọmentị Singapore malite na 1 Septemba.
Elise Becker, onye isi ahịa maka Lufthansa na Asia-Pacific. “Ọ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla ka mba dị iche iche na -arụkọ ọrụ ọnụ iji chọta ụzọ iji weghachi njem ụgbọ elu mba ofesi. Lufthansa na ụgbọ elu Singapore na -enye nnukwu onyinye na mmepe a. "
Kemgbe ọkwa gọọmentị Singapore kwupụtara, ọchịchọ maka ụgbọ elu n'etiti Germany na Singapore amụbaala okpukpu atọ.
Ihe ndị a na -eme ka ndị njem ruo ụgbọ elu VTL na Singapore:
A na-eji Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna ma ọ bụ ọgwụ mgbochi WHO EUL ọzọ na Germany ma ọ bụ Singapore.
nọrọ na Germany na/ma ọ bụ Singapore ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 21 n'usoro tupu ịpụ maka Singapore. Ndị njem VTL ekwesịghị inwe ụmụ amaala German.
nnwale PCR-19 PCR nwere nsonaazụ na-adịghị mma ewepụtara ọtụtụ awa 48 tupu ọpụpụ na ule PCR nke abụọ mgbe ị rutere Singapore. Ruo mgbe enwetara nsonaazụ ọjọọ nke ederede a, ndị njem ga -anọrịrị na họtel ma ọ bụ ebe obibi ha akọwapụtara na Singapore. Dabere na oge njem ahụ, enwere ike ịchọ karịa ule PCR abụọ ọzọ na Singapore.
ntinye akwụkwọ ụgbọ elu na ụgbọ elu VTL ahọpụtara.